तिथि मेरो पत्रु »5Actionable सुझाव तपाईंको सपनाहरूको नारी आकर्षित
द्वारा खोजी विधेयक
तपाईं महिलाहरु अघि लजालु महसुस र तिनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्दैनन्?
तपाईं तिनीहरूलाई अगाडि विश्वस्त तल देखि ग्रस्त?
तपाईं लागि राम्रो खबर छ. तपाईं नै महसुस गर्ने मात्र हो. प्रसिद्ध भनाइ जान्छ
“महिला mazes जस्तै हो, तपाईं तिनीहरूलाई बुझ्न भने, के तपाईं संसारको बुझ्न”.
महिलाहरु संग मेरो कथा:
म सधैं मेरा सबै उच्च स्कूल वर्ष साथ ती lanky र नचाहँदा नचाहँदै मान्छे एक रहेको छ. म भन्न वा महिला प्रसिद्ध हुन के थाहा थिएन.
सधैं मलाई अड्डा भन्ने मात्र प्रश्न महिलाहरु आकर्षित गर्न कसरी थियो? म एक केटी बाहिर सोध्न पहिलो कदम कहिल्यै सक्छ जबकि मलाई आसपास सबै मित्रहरुलाई गर्लफ्रेन्ड थियो.
सुरुमा म अस्वीकृति को डर भोगे. पछि मलाई वरिपरि छोरीहरूको भन्दा पहिले नै संलग्न भएको पाए र यसैले म विकल्प बाहिर थियो.
मेरो दाजु मलाई केही सुझाव दिनुभयो सम्म यो केहि समय को लागि के गर्न जारी. म तिनीहरूलाई पछि लागे र तुरन्त बालिका बीच ख्याति प्राप्त.
आज, म एक पत्नी र विभिन्न महिला दिनांक छ. सुल्झाउने महिलाहरु संग मेरो अनुभव आकर्षित महिलाहरु को कला मा मलाई एक विशेषज्ञ गरेका छन्. पनि यस सन्दर्भमा मदत गर्न सक्छ जो यी सुझाव केही निम्नानुसार छन्.
1. विश्वस्त हुनुहोस्:
हामी विश्वस्त एकदम हद र महिला मूल्यांकन प्रेम छ. तपाईं एक विश्वस्त मनोवृत्ति हरेक स्त्री पछिल्लो हिँड्नुपर्छ.
तपाईं हीनता जटिल ग्रस्त भनी प्रमाणित गर्छ एक निराशावादी संवाद महिलाका लागि बन्द एक ठूलो बारी छ.
तिनीहरूले भर पर्न सक्छौं मानिसहरू जस्तै महिला. त्यसैले, सधैं महिलाहरु तपाईं बलियो र भरपर्दो हो कि चिन्न भन्ने निश्चित गर्न प्रयास. आत्म प्रशंसा को एक बिट पनि महिला आकर्षित गर्न मदत गर्न सक्छ.
2. महिला बधाई:
महिला बिल्कुल प्रशंसा प्रेम. यो शायद महिला आकर्षित गर्न सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा व्यापक प्रयास विधि हो.
तपाईं त्यो लग बाटो मा उनको प्रशंसा गर्न सक्छौं, बाटो मा त्यो चल्छ, वार्ता, कपडे वा मुस्कान. साधारणतया, केहि तपाईं उनको बारेमा उनको खुसी बनाँउछ बधाई.
महिलाको एक धेरै बिल्कुल उनको भित्री सौन्दर्य बारेमा प्रशंसा प्रेम. त्यसैले तपाईं बस आफ्नो नरम र मायालु प्रकृति मा महिला बधाई प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, चिन्ता हृदय र यस्तो अन्य कुराहरू र तुरन्त आफ्नो ध्यान प्राप्त.
3. एक असल श्रोता हुनुहोस्:
पुरुष र महिला बीच एक आधारभूत भिन्नता छ, मानिसहरू एक समस्या बारेमा के गर्दा, तिनीहरूले तपाईं एक संभव समाधान संग आउने आशा.
तथापि, महिला समस्या बारेमा के गर्दा, उनि बस तपाईं समस्या सुन्न र उनको संग sulk गर्न चाहनुहुन्छ.
महिला समस्याको समाधान सन्दर्भमा सानो वा कुनै चासो छैन. तसर्थ, तपाईं बस एक असल श्रोता भएर तिनीहरूले भन्न छ कि सबै आफ्नो कान उधारो निकै तिनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छन्. यो तिनीहरूलाई तपाईं साँच्चै प्रेम भन्ने सोचाइ बनाउन र तिनीहरूलाई ख्याल हुनेछ.
4. तिनीहरूलाई उपहार दिनुहोस्:
उपहार महिलाहरु सबैभन्दा खुसी बनाउन. महिला आकर्षित गर्न कसरी प्रश्न गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जवाफ को एक हरेक सम्भव अवसरमा तिनीहरूलाई उपहार दिन छ. महिला अनुसार, पहिलो स्पर्श जस्तै सरल एक पटक मनाइन्छ गर्न आवश्यक.
त्यसैले, तपाईं घटनाहरूको सानो लागि मिति स्मरण गराउन एक डायरी राख्न सल्लाह दिएको छ. ती घटनाहरू को साप्ताहिक वा मासिक वर्षगाँठ तुरन्त तिनीहरूलाई आकर्षित गर्न मनाउन महिलाहरु उपहार दिनुहोस्.
5. उदारचेता हुनुहोस्:
शिष्टता एकदम हद सम्म सबै भन्दा बढी महिलाहरु द्वारा महत्वपूर्ण छ. त्यो उनको आकर्षित गर्न रेस्टुरेन्ट मा बस्छन सम्म तपाईं उनको लागि कार ढोका खोलेर वा प्रतीक्षा जस्तै शिष्टता को सानो विवरण भुल्ने छैन भनेर सुनिश्चित. उनको या उनको उपस्थिति मा कुनै पनि अन्य महिला गाली कहिल्यै. यो तपाईं woo गर्न चाहनुहुन्छ स्त्रीको मा एक धेरै बलियो छाप मदत गर्नेछ.
महिला आकर्षित गर्न कसरी एक समापन विचार तिनीहरूलाई आफ्नो भावनात्मक पक्ष देखाउनु हो. बलियो र emotionless मानिसहरू रुचि महिला एक मिथक हो.
प्रत्येक महिलालाई उनको काँध मा रुन गर्ने एक मानिस रुचि. त्यसैले, जब सम्भव, उनको आफ्नो भावनात्मक पक्ष देखाउन.
रोमान्टिक चलचित्र उनको लिनुहोस्, मोमबत्ती प्रकाश रात्रिभोज. म सबै मेरो जीवन यद्यपि धेरै तिथिहरु यी सबै प्रयास र प्राप्त गरेका छन्.
तथापि, मना र महिला आकर्षित तरिकाहरू एक महिलाको अन्य फरक. उचित निर्देशन त थप प्रश्न गर्न नहिचकिचाउनुहोस् मलाई यस सन्दर्भमा राम्रो मार्गदर्शन मदत गर्नेछ.
त्यसपछि लागि, लक को सर्वश्रेष्ठ!